Fotoana ho an'ny toro-hevitra avy amin'ny Semalt - Fahaiza-mandinika SEO
Rehefa mieritreritra momba ny SEO ianao dia ireo teny fototra roa izay miampita ao an-tsainareo dia teny fanalahidy sy backlinks. Raha mbola manohy manatsara ny fahatakaran'ny fitondrantenan'olombelona i Google, dia nanangana paikady izy ary nampiova ny heveriny ho marika manan-danja. Ny motera fikarohana dia manome ny UX betsaka araka izay azo atao.
I Ivan Konovalov, mpiasan'ny mpiasa matihanina avy amin'ny Semalt Digital Services, dia manome toky fa hampiasa ireo teknolojia SEO farany nomen'i Google ireo tweets ara-teknika ireo.
tetika # 1. Horonantsary misokatra ao amin'ny media sosialy
Voaporofo ankehitriny fa ny grafida misokatra ao amin'ny media sosialy dia tena ilaina sy tsara kokoa noho ny format tsotra. Mety manana namana Facebook vitsivitsy izay lahatsoratra famoahana lahatsoratra ianao. Ny hevitra dia ny hizara lahatsoratra manerantany amin'ny Internet, ary nomena anarana hoe Open Graph. Soa ihany fa azo ampiasaina amin'ny mpisera Twitter sy Facebook ary afaka mampitombo ny fahombiazan'ny tranonkala. Ny Graph Graph dia mamoaka ny votoatin'ny tranonkalanao ary maneho izany amin'ny ordinatera sosialy. Manampy anao hampitombo ny laharana sy ny fahitana ny tranonkalanao izany, ary Google dia afaka mandranitra ny votoatin'ny Open Graph amin'ny fomba tsara kokoa.
tetika # 2. Hamafa ny rakitra robots.txt
Rehefa mivezivezy manerana ny tranonkala ny milina fikarohana, dia mitady ny robots.txt mandritra izany fomba izany. Zava-dehibe ny tsy manome azy ireo fampianarana diso. Raha nahamarika fifamoivoizana tsy fantatra ianao dia tokony hijery ireo rakitra robot.txt, ary azonao antoka fa marina izy ireo. Plus, azonao atao ny mifehy ny fomba fampivoarana ny tranokalan'ny tranokala sy ny pejy tsy tokony hampidirina noho ny votoaty ambany..Raha lazaina amin'ny teny hafa dia azontsika atao ny milaza fa tokony hamaha ny rakitra robots.txt ianareo ary atsaharo ny spam sy ny bots amin'ny baikon'ny pejy.
tetika # 3. Ny lohateny dia manampy ny Google hahalala ny tranokalanao
Tsy mety ny milaza fa ny tari-doha lohan-dahatsoratra dia manampy ny fitadiavana finday hahatakatra ny tranokalanao amin'ny fomba tsara kokoa. Ny fampandraisana anjara bebe kokoa sy ny fampahafantarana ny votoatinao dia ny hanamora ny fitadiavana ireo fitaovam-pikarohana mba hametrahana azy io ary ny fanandramana tsara kokoa izay azon'ny mpampiasa. Ny fitaovam-pikarohanao manokana indrindra an'i Google dia mahafantatra hoe rehefa mijery ny votoatin'ny tranonkala ny mpampiasa, mamaly izany araka ny tokony ho izy. Google dia afaka manatsara ny laharan'ny toerana raha tsy efa voaomana ny tatitra UX. Ataovy azo antoka fa mampiasa ny lahatahirin'ny logic ianao ary manampy amin'ny scan Google ary manindry ny tranokalanao.
tetika # 4. Ampiasao ny fitaovana ampiasain'ny Google
Azo ampiasaina hanohanana ny tranonkalan'ny tranonkala ny tranonkalan'ny tranonkala Google mba hanampiana kokoa ny tranonkala. Mampitombo ny paikady SEO anao amin'ny ankapobeny izany. Ny fitaovana toy ny Search Console Google dia azo ampiasaina amin'ny fotoana tsy tapaka. Ireo fitaovana ireo dia manampy anao hanara-maso ny fomba namoahana ny tranonkalanao sy manome vaovao momba ny paikady SEO anao. Azonao atao ny manararaotra ny tolotra maimaim-poana ao amin'ny Google ary manolotra mivantana ny sitemap amin'ny milina fikarohana. Izany dia hamela azy ireo handanjalanja haingana ny tranonkalanao, ary tsy voatery miandry ela ianao.
tetika # 5. Jereo ny plugins farany ary ny fanavaozana
Tokony hojerenao foana ny plugins sy ny lesona farany. Ataovy azo antoka fa ny haavon'ny tranonkala, ny navigation, ny famolavolana ary ny fampisehoana dia manakatra ny marika ary mampiditra ny fijerin'i Google. Saika ny tranokalan'ny mpampiantrano fampiantranoana no manavao ny môdely sy ny plugins amin'ny fotoana tsy tapaka. Tokony hanao toy izany koa ianao raha te-hanatsara ny UX tranonkala, hanatsara ny fahombiazany sy ny fahitana azy.
tetika # 6. Alefaso haingana haingana: Google sy Facebook
Facebook Instant Articles, News of Apple sy ny Google AMP ny fitaovana tsara indrindra sy miorina ao amin'ny aterineto, mampanantena ny fametrahana sy fandrakofana madio ny tranokalanao ary manatsara ny vanim-potoana haingana.
Ireo mpiserasera dia tsy mifantoka amin'ny Facebook rehefa mikidika ireo rohy ireo izy, fa ny votoatin'ny tranonkalanao dia aseho amin'ny endrika maotina. Mpitory maro no manararaotra izany teknika izany ary mampitombo ny fifamoivoizana an-tranonkalany, manatsara ny laharam-pahefan'ny karoka.
Na mampiasa ireo teknika rehetra ireo ianao na mifidy afa-tsy ny iray amin'izy ireo, dia ho hitanao fa ny toerana misy anao dia manatsara ny karazana fikarohana Source .